Barcelona oo dooneysa inay ku ciriiriso kooxda Man United saxiixa mid ka mid ah xidigaha ku sugan horyaalka Premier League – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Talaaddo, October, 16, 2018(HNN)Barcelona ayaa dooneysa inay ku ciriiriso kooxda Manchester United mid ka mid ah xidigaha ku sugan horyaalka Premier League ay dooneyso inay bar-tilmaameed ka dhigato suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu sheegay in Barcelona ay kula tartami doonto dhigeeda Manchester United, suuqa furmi doono xiliga jiilaalka ee soo aadan, si ay kaga afduubato difaaca kooxda Tottenham iyo xulka qaranka Belgium ee Toby Alderweireld.
Heshiiska uu Toby Alderweireld ku joogo kooxda Tottenham ayaa wuxuu dhacayaa dhamaadka xili ciyaareedkan, waxaana suuragal ah inuu kaga dhaqaaqo Spurs xili ciyaareedka soo aadan beeca xurta ah, balse sidoo kale waxaa suuragal noqon karta in suuqa soo aadan ee Janaayo ay ka iibiyaan kooxaha daneenaya saxiixiisa.
Barcelona ayaa raadineysa saxiixa difaac aad u xoogan, kadib dhaawaca soo gaaray xidigaha Thomas Vermaelen iyo Samuel Umtiti iyo iyo hoos u dhaca ku yimid Gerard Pique.
Dhinaca kale Manchester United ayaa isku dayday inay lasoo saxiixato Toby Alderweireld suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay, laakiin heshiiska laguma guuleysanin, balse waxay qorsheenayaan in markale ay u dhaqaaqaan saxiixiisa suuqa furmi doono bisha janaayo.
Barcelona oo dooneysa inay ku ciriiriso kooxda Man United saxiixa mid ka mid ah xidigaha ku sugan horyaalka Premier League added by admin on 16/10/2018